Kuwa amarekhodi i-New Zealand ihlula i-South Africa kumdlalo wokuqala we-Tri-Series
TAUNTON, ENGLAND - JUNE 20: Lizelle Lee of South Africa looks on as Suzie Bates of New Zealand scores runs during the International T20 Tri-Series match between New Zealand Women and South Africa Women at The Cooper Associates County Ground on June 20, 2018 in Taunton, England. (Photo by Julian Herbert/Getty Images)
Kube namarekhodi amaningi njengoba ama-Momentum Proteas ehlulwe ngama-runs angu-66 i-New Zealand kumdlalo wokuqala we-Tri-Series e-Somerset noLwesithathu.
Ama-White Ferns ahlanganise umphumela omkhulu kwikhilikithi yama-T20 yabesifazane kulelizinga ngesikhathi bethola u-216/1. Nokho i-South Africa ibizama, ithole u-150/6 njengoba behlulwe kumdlalo wokuqala we-series.
Bekumayelana ne-New Zealand, kumdlalo wokuqala njengoba bawuqale kahle umqhudelwano. Beholwa ngaphambili ukapteni u-Suzie Bates njengoba ehlanganise umphumela wakhe omkhulu futhi ikhulu lakhe lokuqala kuma-T20I ngokushaya ama-runs angu-124 engaphumanga (66 balls, 16 fours, 3 sixes). Kube umphumela wesibili omkhulu olingene nomunye kwikhilikithi yama-T20.
Uma lokho bekunganele, ukapteni uphinde wanezezela ngelinye irekhodi egameni lakhe njengoba ehlanganise i-partnership yama-runs angu-182 no-Sophie Devine, i-partnership ehamba phambili kwikhilikithi yama-T20I yabesifazane.
Kuphinde kwaba i-career-best score ka-Devine emuva kokuthi ashaye ama-runs angu-73 (48 balls, 4 fours, 4 sixes), okuvumele iqembu lakhe libeke umphumela omkhulu emuva kokuhlulwa kwi-toss futhi kwathiwa bashaye kuqala.
u-Marizanne Kapp uyena kuphela othole impumelelo ngokuphosa emuva kokukhipha oyedwa ngo-32.
Abe South Africa baqale kahle bafika ku-30 kuphume umuntu oyedwa nge-over yesine, kodwa ukuphuma kwama-wicket amaningi kubenze balahlekelwa indlela.
u-Hayley Jensen ukhiphe ama-wicket amathathu ngama-runs angu-28 njengoba belahlekelwe ama-wicket amathathu benama-runs angu-40, okubalwa khona i-wicket yomdlali ovula u-Laura Wolvaardt enama-runs angu-25.
Othole ama-runs amaningi futhi ukapteni u-Dané van Niekerk ushaye u-58 (57 balls, 9 fours, 1 six) futhi ngesinye isikhathi utakule ama-Proteas ngokubabeka ku-119/4 kulandela i-partnership ephule irekhodi ye-wicket yesihlanu yama-runs angu-79 no-Mignon du Preez (36).
Kodwa, bekungeke kwanele njengoba behluliwe.
i-South Africa kuzomele isebenze kanzima uma belungiselela ukubhekana ne-England ngo-17:40 (18:40 SAST).
Umdlalo wamaProteas esifazane kanye ne-New Zealand uyekiwe ngenxa yemvula